सामसङको ‘जोड्दै खुसी, सजाऔं जिन्दगी’ अफर, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्मको छुट - Technology Khabar
» सामसङको ‘जोड्दै खुसी, सजाऔं जिन्दगी’ अफर, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्मको छुट
सामसङको ‘जोड्दै खुसी, सजाऔं जिन्दगी’ अफर, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्मको छुट
Technology Khabar १ आश्विन २०७७, बिहीबार
सामसङले ‘जोड्दै खुसी, सजाऔं जिन्दगी’ फेस्टिभ अफर नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामसङका उत्पादनहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको घर र परिवारमा खुसी सजाउन सामसङले यस अफर प्रस्तुत गरेको हो ।
यस ‘जोड्दै खुसी, सजाऔं जिन्दगी’ अफर अन्तर्गत सामसङका कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स् उत्पादनहरुमा अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस ३५ प्रतिशतसम्मको छुट ग्लोबल नं १ सामसङ टिभि, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ्ग मेसिनको खरिदमा लागू हुनेछ ।
बदलिंदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सामसङ प्लाजाको आधिकारिक वेभसाइटबाट पनि सामसङका उत्पादनहरु खरिद गर्ने वैकल्पिक सुविधा पनि ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिएको छ । सामसङले टिभिहरुमा २ वर्ष (१ वर्ष फूल प्रोडक्ट वारेन्ट र थप १ वर्ष प्यानलमा) को वारेन्टि प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै डिजिटल इन्भर्टर टेक्नोलोजिमा १० वर्षको वारेन्टी रहेको छ । निश्चित आउटलेटहरुबाट सहज किस्ताबन्दी तथा निश्चित सामानहरु निःशुल्क जडान गरिदिने सुविधा पनि रहेको छ ।
यो फेस्टिभ अफर असोज १ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म नेपालभर सामसङका आधिकारिक डिस्ट्रीब्युटर हिम इलेक्ट्रोनिक्स् प्रा.लि.र त्रिवेणी ब्यापार प्रा.लि. द्वारा आफ्ना डिलरहरु मार्फत लागू गरिएको सामसङले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७, बिहीबार
कति मूल्य पर्ला सामसंग ग्यालेक्सी एस नाइनको ? यस्तो छ फिचरहरु
ह्वावे पी३० सिरिजको प्रि-बुकिङ्ग नेपालमा शुरु, बुकगर्नेलाई उपहार
स्मार्ट टेलिकमको लकडाउन अवधिमा विभिन्न अफर, हरेक डाटा प्याकको खरिदमा डबल डाटा पाईने